Xiriiriyaha Qoyska Google: Muxuu yahay codsigan maxaase loogu talagalay | Androidsis
Xakamaynta waalidka ee Android waa wax muhiim ah, in aan ku habeyn karno wakhti kasta oo ka mid ah goobaha taleefanka. Google wuxuu na siiyaa qalab taxane ah kiiskan. Waxaa macquul ah in midka ugu muhiimsan uu yahay Google Family Link, oo laga yaabo inay u egtahay inbadan oo idinka mid ah ay yaqaanaan. Sidaa darteed, waxaan kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan qalabkan hoos ku xusan.
Waad awoodaa ogow waa maxay Google Family Link, marka lagu daro waxa loogu talagalay. Marka, dhammaan adeegsadayaasha ka fekeraya inay adeegsadaan xakameynta waalidka ee Android waxay awoodi doonaan inay u adeegsadaan qalabkan taleefannadooda. Sidaa darteed waa muhiim in la ogaado fursadaha uu qalabkan shirkadda Mareykanka na siinayo.
1 Muxuu yahay Google Family Link
Muxuu yahay Google Family Link
Google Family Link waa codsi xakameynta waalidka in shirkadda Mareykanku abuurtay. Ilaa saddex sano ka hor codsigan waxaa si rasmi ah loogu bilaabay Android. Fikradda ka dambeysa codsigan ayaa ah in waalidiinta ay awood u yeelan doonaan inay meel fog ka xakameeyaan taleefanka carruurtooda, kaasoo noqon kara taleefan Android ah ama Chromebook ah, maadaama ay labadaba la jaan qaadi karaan.
Waalidiinta si ay u awoodaan inay adeegsadaan codsigan, waa in loo adeegsadaa aaladaha leh nooc ka mid ah Android waxay u dhigantaa ama ka sarreysaa Android 4.4 KitKat. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa aaladaha IOS, illaa iyo inta ay leeyihiin nooc iOS ah oo u dhigma ama ka weyn 9. Xaaladda qalabka carruurta, waa inay lahaadaan nooca nidaamka hawlgalka ee u dhigma ama ka weyn Android 7.0 Nougat.
Google Family Link waa nidaam xakameyn waalidnimo isticmaal wakhti kasta adoo adeegsanaya koontada Google. Waalidiinta waa inay ku xiraan cinwaanka Google ama Gmail, ee ay ku dajiyeen taleefankooda Android. Waxaad sidoo kale ubaahantahay xog ama qufullo lagu sameeyay aaladaha koontada su'aasha lagu isticmaalay. Taasi waa, haddii aad isticmaasho koonto kale ama haddii aad go'aansato inaad bedesho xisaabaadka, waa inaad dib u habeyn ku samaysaa wax walba mar kale qalabka.
Maadaama ay tahay codsi waalid xakameyn ah, waxaan fikrad ka heli karnaa howlaha ama adeegyada aan ka helno Google Family Link. In kasta oo ay muhiim tahay in la ogaado wax kasta oo codsigu noogu dhigan karo noocan oo kale ah. Waad ku mahadsan tahay, waa suurtagal in lala socdo waqtiga ilmuhu ku qaato fiirinta taleefanka. Xogtaan waa la ballaarin karaa, iyadoo la ogyahay inta ay ku qaataan codsi gaar ah. Markaa waxay u oggolaanaysaa xakamaynta saxda ah isticmaalka taleefanka.
Waalidiinta sidoo kale waxaa loo oggol yahay inay xadidaan waqtiga. Sidan oo kale, waxay go'aamin karaan inta ay carruurtu ku haysan karaan mobilada, ama goorta. Marka lagu daro suurtagalnimada in la xaddido marin u helka codsiyada qaarkood, maadaama ay suurtagal tahay in qaabab sidan looga hor istaago. Marka waad ka hortagi kartaa inay helaan marin aan ku habboonayn iyaga. Tan awgeed, aaladaha ay ka mid yihiin Raadinta Badbaadada ah ayaa la siiyaa sidoo kale waxay xannibaan barnaamijyada ku yaal Play Store.
Mid kale oo ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee Google Family Link waa in la ogaadaa marwalba meesha qalabku yaalo ee carruurtooda. Waxaan arki karnaa goobtooda marwalba, si aan sifiican u ogaano meesha ay ku yaalliin. Waalidiinta sidoo kale waxay awoodi doonaan inay arkaan rukhsadaha barnaamijyada la rakibay. Sidan ayaad ku arki kartaa haddii wax lagu rakibayo rukhsado xadgudub ah. Hawlaha kale ee la heli karo waa dib-u-dejinta lambarka sirta ah ee koontada Google, suurtagalnimada isticmaalka YouTube Kids, sidoo kale iyadoo la adeegsanayo raadinta aaminka ah ama la arko qalabka adeegsanaya koontada Google.
Sida caadada u ah adeegyada shirkadaha iyo codsiyada, waxaan ku soo dejisan karnaa Google Family Link bilaash taleefanka. Waxaa jira laba codsi, midka waalidiinta, halkaasoo wax walboo loo qaabeeyey ka dibna barnaamijka ay tahay in lagu rakibo taleefanka carruurta.
Xiriirka Qoyska Google
Family Link ilmaha iyo dhalinyarada
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Xiriiriyaha Qoyska ee Google: Maxay tahay maxaase loogu talagalay?